Ciidanka Itoobiya oo Hub Laga Furtay. (Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 25, 2021 295 0
Dagaallo hor leh oo ay guulo ka gaareen malleyshiyaadka qowmiyadda Tigree ayaa ka dhacay gudaha dalka Itoobiya 48-dii saac ee lasoo dhaafay. Dagaaladan oo ahaa kuwa culus ayaa ka dhacay gobolada Gonder iyo Wallo oo ka tirsan dhulka Amxaarada halkaasoo ay isku fara saareen ciidamada Huwanta ah ee dowladda itoobiya, Eratariya iyo Amxaarada oo wada socda iyo TPLF.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray dhulkaas ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Itoobiya laga qabsaday degaano dhaca waqooyiga Wallo gaar ahaan dhul badan oo dhaca duleedka Dhase. Afhayeenka TPLF, oo lagu magacaabo Getajow ayaa baraha Internetka ku baahiyay muuqaalo muujinaya guulaha ay gaareen, waxaana la arkayaa ciidan badan oo Tgree ah oo ku dul dabaal degaya gaadiid dagaal oo ay ka furteen dowladda.
Gaadiidka ayaa waxaa kamid ah kuwa Taangiyada loo yaqaano, qoriga BM, gaadiid iyo agabyo kale. Gitajow, wuxuu sheegay in sodoo kale ay qabsadeen degaano ka tirsan gobolka Gonder, ayna u babac dhigeen duqeymo diyaaradeed oo ay kala kulmeen xukuumadda Abiy Ahmed. Wuxuu si jeesjees ah u sheegay in duqeymaha ay wax yeelleeyeen shacabka Amxaarada balse aaney iyagu waxba gaarin illaa iyo haddana ay u taagan yihiin sida uu hadalka u dhigay iney difaacaan shacabka Amxaarada.
Iyadoo uu xaalku sidaa yahay, ma jirto wax awood ah oo ay dib u dhigatay dowladda Itoobiya iyadoo saacad saacad furimaha u keeneysa malleyshiyaad hor leh oo u badan kuwa aan tababar lahayn oo lasoo raafay. Tigreega oo ka gaashaamanaya in ay ku dhacaan dabin islamarkaana xasuuq loo geysto oo lasoo afjaro ayaa guushooda kadib waxay billaabeen iney koraan buuraha waaweyn ee ku hareereysan gobolka Gonder.
Muuqaalada lasoo bandhigay ayaa waxaa laga dheehanayaa rag iyo dumar Itoobiyaan ah oo koraya buuraha Gonder oo dhulka ka sarreeya wax ka badan 4000, oo mitir, waxaana buuraha ay qabsadeen kamid ah buur uu todobaadyo ka hor isku soo sawiray Ra’iisulwasaaraha Itoobiya, ciidamadana ugu soo khudbeeyay. Buurahan ayaa kamid ah kuwa ugu keymaha badan Itoobiya, iyadoo uu jiro qaanuun ay hey’adda Unesco soo saartay oo amraya in la ilaaliyo buuraleydaasi.
Dhinaca kale, wararka ka imanaya magaalada ugu hormarsan dhulka Amxaarada ee Bahardar, ayaa waxaa laga soo sheegayaa inuu ka billowday barakac ay sameynayaan dad weynaha. Baraha bulshada ayaa waxaa lasoo dhigay sawirro muujinaya dadyow badan oo isaga hayaamaya magaalada, kadib markii Tigreegu ay kusoo dhawaadeen degaano ay sahlan tahay iney kasoo tallaabaan. Wax yaabaha ay dadku u barakacayaan waxaa kamid ah iyadoo dhawaan la jaray buundo istaraatiiji u ahayd magaalada.
Dalka Itoobiya waxaa kusoo baahaya colaadaha u dhaxeeya TPLF, iyo Xukuumadda, iyadoo dadka falanqeeya arrimahan ay sheegayaan in Abiy Axmad iyo xulufadiisu ay ku daaleen dagaalkan, maadaama gobolada la isku heystaahi ay yihiin kuwii Amxaarada. Wareysi uu bixiyay Abiy Ahmed lagana sii daayay TV-ga dalka Eratariya, waxaa laga dheehanayay dabacsanaan iyo inuu leeyahay “annagu ma dooneyno inaan dagaal dambe ku qaadno dhulka Tigreega” iyadoo aan ognahay in todobaadkii lasoo dhaafay ay gudiga Amniga oo uu isagu ugu sarreeyo ay ku goodiyeen iney soo afjarayaan TPLF.
Dadka u dhuun daloola siyaasadda Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in dowladda Eratariya ay kasoo horjeesatay dabacsanaanta xukuumadda iyo in dagaalku istaago, maxaa yeelay waxay cadaawad badan u qabtaa Tigree, oo ay dhulal dhanka xuduuda ah isku heystaan. Arrintu si kastaba ha ahaato’e, dagaalada ka socda Itoobiya ayaa sadaxdii bilood ee lasoo dhaafay isku badalay in gacanta sare ay leeyihiin TPLF, waxaana caddeyn u ah, cidda wax weerareysaahi waa iyaga, degaanada lagu dagaalamayana ma ahan dhulkooda, oo waa dhulkii dowladda iyo Amxaarada.
Labada dhinacba waxaa kala gaaray khasaare lixaad leh oo dhanka basharka ah, mana muuqato sabab uu ku istaago dagaalka oo aan ka ahayn in Abiy Ahmed laga awood roonaado, kolba haddii isaga iyo ciidankiisu noqdeen (ilko doofaar oo la sahansaday)